Toni Kroos oo ka hadlay heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaciisa – Gool FM
Toni Kroos oo ka hadlay heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaciisa
(Real Madrid) 06 Dis 2018. Xidiga khadka dhexe kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa kaga warbixiyay heer garsiisan yahay dhaawaciisa boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka.
Laacibka reer Germany ee Toni Kroos oo haatan da’adiisu tahay 28 jir ayaa wuxuu tilmaamay inuu dhaawac ka qabo dhanka Jilibka.
Toni Kroos oo fariin qoraal ah kula wadaagay jamaahiirta boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaciisa.
“Waxaa wali socda baxnaaninta dhaawaca dhanka jilibka ah, kaasoo soo jiitamayay tan iyo kulankii Roma, waxaan rajeenayaa in aan dib u soo noqdo, waliba sida ugu dhaqsida badan”.
Toni Kroos ayaa ka mid ah xidigaha ugu fiican khadka dhexe ee kubada cagta aduunka, sababa la xiriira awoodiisa ciyaareed, ma ahan inuu kaliya si wanaagsan kaga ciyaari karo khadka dhexe ee wuxuu sidoo kale gacan weyn ka geystaa sameynta fursadaha dhanka weerarka ee kooxda Real Madrid.
Toni Kroos ayaa xusid mudan in laga reebay liiska xidigaha kooxda Real Madrid ee kulankii dhawaan soo idlaaday lugta labaad wareega 32 kooxood ee Copa del Rey ay kula ciyaareen kooxda Melilla, kaasoo Los Blancos ay guusha ku raacday 6-1.
Liverpool oo shaacisay mudada uu Gomez garoomada ka maqnaan doono, kadib dhaawacii kasoo gaaray kulankii Burnley